निबन्धहरू लेखन लगभग सधैं समय सीमा आउँछ. यो दबाब लेख्न आवश्यक अर्थ, र यो सबै छैन सुखद छ. त्यसैले, यी शीर्ष चेकआउट6सबै भन्दा राम्रो निबंध कसरी लेख्न सुझावहरूको. यी तपाईं संक्षिप्त लेख्न मदत गर्नेछ, बिन्दु र रोचक निबन्धहरू तपाईं राम्रो ग्रेडिंग ल्याउनेछ भनेर.
1. आफ्नो विचार सङ्कलन
Thevery पहिलो चरण शीर्षक संग आएको छ. तपाईं पहिले नै शीर्षक छ भने, तपाईं बस सही दिशा मा आफ्नो अनुसन्धान ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ. अनलाइन मात्र महत्त्वपूर्ण स्रोतहरू भेला सुरु, र तिनीहरूलाई बुकमार्क. यो अनुसन्धान चरण हो, त्यसैले अब तपाईं विस्तार सबै पढ्न छैन. यी पुस्तकचिनो बचत गरेर, तपाईंले तिनीहरूलाई फर्कन र तपाईं वास्तवमा लेख्न राम्ररी अघि तिनीहरूलाई पढ्न सक्नुहुन्छ. तपाईं शीर्षक संग आउन आवश्यक छ भने आफैलाई तपाईं somethingyou बारेमा लेख्न हुनेछ निश्चित मा धेरै राम्रो हो बनाउन- यो एक शौक हुन, व्यक्तिगत मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, एक विवादास्पद विषयमा राय, आदि.
2. तपाईं समय छैन भने मद्दत प्राप्त
तपाईं समय वा कौशल कमी भने अब कुराहरू स्थगित छैन राम्रो निबंध लेख्न. बनाउन शीर्ष essaywriters केही समीक्षा हेर्न र गर्न मद्दत निश्चित. लेखकहरू एउटा व्यावसायिक टोली तोकिएको म्याद द्वारा तपाईंको लागि सम्पूर्ण निबंध रचना हुनेछ. को निबंध गर्न सबै अधिकार तपाईं स्थान्तरण गरिनेछ. त्यसैले, तपाईं साझेदारी गर्न सक्नुहुन्छ, मुद्रण, अगाडि र आफ्नो सिर्जना रूपमा निबंध प्रस्तुत.
3. को निबंध भर आफ्नो विचार एकताबद्ध
जब तपाईं आफ्नो निबंध लेखन समात्नु छन्, तपाईं प्रारम्भिक उद्देश्य भन्दा नयाँ दिशा तिर सिफ्ट भन्ने महसुस हुन सक्छ. त्यसैले, सधैं पछाडि जानुहोस् र आफ्नो निबंध को शुरुवात पढ्न, र सम्पूर्ण कागज एकताबद्ध प्रयास. तपाईं परिचय अनुमति हुँदैन, हुन निबंध को शरीर र निष्कर्षमा3अलग संस्थाहरू. सबै तरिकाले प्रवाह गर्न आवश्यक, एक तार्किक तरिका. तपाईं आफ्नो मन परिवर्तन यदि यो कुरा छैन, या केहि मा आफ्नो राय परिवर्तन, तपाईं बस तरिकाले सबै एकताबद्ध गर्न आवश्यक.
4. सधैं आफ्नो स्रोत उल्लेख
आफ्नो निबंध दृश्य को एक व्याकरण र stylistic बिन्दुबाट सिद्ध छ भने पनि ... यदि तपाईंको स्रोतहरू भनिन्छ साहित्यिक चोरी छ उद्धृत छैन. तपाईं निश्चित जस्तै समस्या जोगिन चाहनुहुन्छ. त्यसैले, तपाईं आफ्नै शब्दहरू inyour कुरा स्थानान्तरण पनि प्रसिद्ध अभिनेता bya छलफल गरिएको, लेखक, वा राजनीतिज्ञ, तपाईं सही स्रोत उद्धृत गर्न आवश्यक. तथ्यलाई तपाईं आफ्नो शब्द अरू कसैको विचार मा भन्न कि ... कि अझै पनि आफ्नो विचार हो.
5. तोकिएको विषय सम्बोधन
आफ्नो शिक्षक तपाईं एक निश्चित विषय तोकिएको यदि ब्रश वरिपरि पिटे छैन ..., तपाईं ठीक कि बहस गर्न आवश्यक छ. यदि तपाईंलाई विषयमा रुचि छैन, तपाईं अनुसन्धान गर्नुपर्छ, र अनलाइन विषयमा थप पढ्नुहोस्. त्यसपछि, आफ्नो निबंध सँगै राख्दै सुरु तर तोकिएको विषय सम्बोधन गर्न ध्यान. पोस्ट प्रश्नहरूको जवाफ, र अन्त मा तपाईं एक सानो opinionated बन्न र विषयमा दृश्य आफ्नो बिन्दु प्रस्तुत गर्न अनुमति.
6. थुप्रै स्रोत प्रयोग
इन्टरनेट संग अड्केको प्राप्त छैन मात्र. उदाहरणका लागि अमेरिकी इतिहास मा एक निबंध लेखन भने, शब्दकोश लागि घर वरिपरि देख सुरु, thesaurus पुस्तकहरू, डीभिडी चलचित्र AmTop सम्बन्धी संग गरेको6सर्वश्रेष्ठ Essayerican इतिहास लेख्न कसरी सुझावहरू, र इतिहास लेख संग पनि पुरानो पत्रिका. "विमर्श" यस प्रकारको निश्चित तपाईं अद्वितीय निबन्धहरू लेख्न मदत गर्नेछ. तपाईंको स्रोतहरू आवश्यक छैन 100% अनलाइन स्रोतहरु. तिनीहरूले कुनै पनि स्रोतबाट हुन सक्छ, एक इतिहास पीएचडी विद्यार्थी वा उदाहरण सञ्चालन पनि एक साक्षात्कार. सृजनात्मक बन, अनुसन्धान मा गुणवत्ता समय लगानी र सही निबंध लेख्न व्यवस्थापन गर्नेछ!
« कसरी तपाईंको कलेज प्रोफेसर असल पक्षमा प्राप्त गर्न ?
6 सुझाव निबंध राइटर्स पत्ता को »